लुक्लाका केटाकेटीलाई अनुपम खेरले बाँडे आमाले बुनेको सुइटर :: Setopati
तस्वीर: अनुपम खेरको ट्विटरबाट।
'उचाइ' सिनेमाको छायांकन गर्न नेपालको लुक्ला पुगेका अनुपम खेरले त्यहाँका केटाकेटीलाई सुइटर बाँडेका छन्।
आफ्नी आमाले बुनेको सुइटर उनले लुक्लाका बालबालिकालाई दिएका हुन्। बुधबार ट्विटरमा एउटा भिडिओ हालेर उनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
खेरकी आमाले बालबालिकालाई सुइटर बनाएको उनले बताएका छन्। अनुपम खेर आफैंले भेटेर उपहार दिन भनेपछि उनले होटलमा बालबालिकालाई बोलाएका थिए।
उनले होटलमा बोलाएर बालबालिकालाई मनपर्ने रंगको सुइटर दिएका थिए।
'आमाले बुनेको सुइटर बच्चाहरूलाई! आमाले बच्चाहरूलाई मैले प्रत्यक्ष भेटेर उपहार दिन जोड गरेकी थिइन्। मैले लुक्लाका बच्चाहरूलाई बोलाए र मनपर्ने रंगको सुइटर छानेर लिन भनेको थिएँ,' उनले लेखेका छन्,'उनीहरू सुइटर लगाउन र ठूलो स्वरमा देउराली रक्स भन्न उत्साही थिए।'
भिडिओमा खेरले बच्चाहरूसँग कुराकानी गरेको पनि देखिन्छ। उनले बच्चाहरूसमक्ष आफ्नो परिचय समेत दिएका छन्।
बालबालिकाले गीत पनि गाएको भिडिओमा देखिन्छ। र अन्तमा उनीहरूले सुइटरका लागि धन्यवाद भनेका छन्।
Mom knits sweaters for children! She insisted that I personally present it to them.I invited the children of #Lukla & asked them to pick up their favourite Color! They were delighted to wear them & scream loudly #DulariRocks!🤓Thanks @shwvenkat for putting this video together!🌻 pic.twitter.com/lAeCPQ6k0k
— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 12, 2021
बलिउड सिनेमा उचाइको छायांकनको लागि खेरसहित परिणीति चोपडा र बोमन इरानी अहिले लुक्लामा छन्।
काठमाडौंमा केही समय बिताएर असोज २० गते बुधबार उनीहरू छायांकनको लागि लुक्ला प्रस्थान गरेका थिए। यस सिनेमामा नेपाली कलाकारहरू पनि जोडिएका छन्।
गत मंगलबार अनुपम खेरले काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथको दर्शन समेत गरेका थिए।
उचाइमा एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायिक नेपाली कलाकार, प्राविधिक र भरियासहित केही स्थानीय पनि जोडिएको नेपालका तर्फबाट फिल्मको व्यवस्थापन गरिरहेको 'थ्रि ह्विलर्स फिल्म प्राइभेट लिमिटेड'का निर्देशक पुष्पराज न्यौपानेले बताएका थिए।
फिल्ममा नेपाली कलाकारहरू परिमिता राणा, सरोज लामिछाने, डम्बर बोहरा, उरुशा जोशी, रमेश बज्राचार्य, तेन्जिङ ग्याचो शेर्पा, निरज मुक्तान, नारायण विश्वकर्मा, आयुश सुवेदी, स्नेहा अधिकारी, सरोज प्रजु, किस नन्दु सिंह (सिद्धार्थ), आरोन गुरुङलगायत कलाकारले अभिनय गर्ने निर्देशक न्यौपानेले बताए।
सिर्जना सूत्रका संस्थापक सुवास प्रधानका अनुसार उचाइका लागि नेपाली कलाकारको कास्टिङ छनोटको काम सिर्जना सूत्रले गरेको हो। उनले ती कलाकारमा केही बालकलाकारसमेत रहेको जानकारी दिए। फिल्मका लागि छनोट भएका नेपाली कलाकारहरू पनि गत बुधबार नै लुक्लाका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन्।
उचाइको छायांकन नेपालका पहाडी तथा हिमाली भेगका लुक्ला, नाम्चे, मनाङलगायत काठमाडौं र भारतको मुम्बईमा हुनेछ। छायांकनका लागि भारतबाट १५० जनाभन्दा बढी क्रू मेम्बर नेपाल आएको बताइएको छ।
यो फिल्म मन मिल्ने साथीहरूको मित्रताको कहानी भएको ट्राभल मूभि हो।
फिल्ममा अनुपम खेर, बोमन इरानी र परिणिताबाहेक अमिताभ बच्चन र सारिका हसन महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिने छन्।
बलिउडका हरे रामा हरे कृष्णा, जोनी मेरा नाम, महान, युद्ध, घरवाली बहारवाली, खुदा गवाह, लभ इन नेपाल, बेकाबुलगायत फिल्म नेपालमा छायांकन भएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २७, २०७८, १६:००:००